budget စတေးရှောင်ခြင်း – ၂ – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
This entry was posted in shared information and tagged co-operative, Expectation, individualism, Life, Prayer, strength. Bookmark the permalink.
← budget စတေးရှောင်ခြင်း-၁
budget စတေးရှောင်ခြင်း – ၃ (ဇာတ်သိမ်း) →
7 thoughts on “budget စတေးရှောင်ခြင်း – ၂”
MrDBA | June 16, 2009 at 3:08 pm
မြန်မြန်အလုပ်ရပါစေ ဘုရား (ဟမ်!)
ကုမ်ရာသီသူ | June 16, 2009 at 3:40 pm
ကိုကြီးဒီဘီ>> ဇာတ်သိမ်း- မျှော့
KoGyi | June 16, 2009 at 3:56 pm
You are talking about yourself or someone else? The following sentences make me confusing.
ကျွန်မ ၀န်ခံချင်သည့်တစ်ချက်က ဒီတစ်ခါ ကြာကြာ မစဉ်းစားချင်သဖြင့် မြန်မြန်ပြီးအောင် မြန်မြန်ဆွဲရစ်ပါသည်။
သမီးယောက်ဖလို ခင်မင်သွားသော နယ်ခံအကိုတစ်ယောက်က “ယောက်ဖ- ဒီမှာပဲ အလုပ်ရှာလိုက်ပါလား”ဟု မြှောက်ပေးသည်။
Like to ask you that you are female? right? ယောက်ဖ is just for male.
ကုမ်ရာသီသူ | June 16, 2009 at 4:03 pm
Well, in English, there is only one noun, ‘brother-in-law’ for both relationships, let me say so. He’s still calling me ‘ယောက်ဖ’ since then. It’s likeasimple pronoun for brotherhood between us. Thanks for your comment.
P.Ti | June 16, 2009 at 4:58 pm
ရင်မောစွာ ဖတ်သွားပါတယ်။ အဲလို ကိစ္စတွေကြားမိပေမယ့် တိတိကျကျကြီး မသိတော့ အဲလို ဒုက္ခများတယ်ဆိုတာ မသိခဲ့ဘူး။ တခါက အမ နဲ့ အမေ တို့နဲအတူ မလေးရှားသွားလည်တော့ အမေနဲ့ ကျွန်တော့်ကို မရစ်ပဲ အမကျမှ ရစ်နေတယ်။ ဘာသွားလုပ်မှာလဲ၊ ဘယ်မှာနေမှာလဲ၊ ဘယ်နှစ်ရက်ကြာမှလဲနဲ့… နောက်ဆုံး ကျွန်တော်က မင်းတို့ မလေးရှားမှာ နေခိုင်းလည်း ငါတို့ မနေဘူး။ ဆိုတော့ မှာ ဘုကြည့်ကြည့်ပြီး တုံးထုပေးလိုက်တယ်။ အင်မတန် ရစ်တဲ့ ငရစ်တွေ..
ကိုသာသာ | June 16, 2009 at 5:02 pm
The great adventure indeed.
ကုမ်ရာသီသူ | June 17, 2009 at 2:06 am
ကိုသာသာ>> ထင်တယ်လာ့။ ……… ခုတော့လည်း……. အမှတ်တရများပါပဲဗျာ။
ပီတိ (ဟုတ်လားမသိ၊ နာမည်ကို ရမ်းသမ်း အသံထွက်လိုက်တယ်)>> ရစ်ရရင် ပြီးရောကို ရစ်နေကြသလိုပဲ။ ဟုတ်ပါ့။